ကနေဒါက CFOB အသင်း ရိုဟင်ဂျာများဘက်က လိုက်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရခြင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
(အညွန်း – တင်မောင်ထူး၊ အမှူဆောင်ညွန်ကြားရေးမှူး၊ CFOB ၀က်ဆိုက်) ဥမ္မာဦး ဘာသာပြန်
နိုဝင်ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၂
လပေါင်းများစွာစဉ်းစားပြီး နောက်ကျွန်တော်ဟာ CFOB (Canadian Freinds of Burma) အဖွဲ့ရဲ့ ကွန်ယက်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ြ ပြသနာကိုဖွင့်ဟဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လောက်ထိ ဖိအားပေးခံရသလဲဆိုရင်ဖြင့် CFOB ဟာ ကနေဒါအဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်းထားတဲ့ကော်မတီဖြစ်တဲ့ Canadain NGOs Committee on
အထူးသဖြင့် CNC ရဲ့အဓိကအသင်းဝင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ အိုတဝါမှာအခြေစိုက်တဲ့ Inter Pares လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ဟာ အမြဲတမ်းဆိုသလို CFOB
တဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့သိထားသော Inter Paresအဖွဲ့ဟာ CIDA လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကနေတဆင့် ရရှိထားတဲ့ ကနေဒီယန်းများရဲ့ အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ ငွေကြေးတွေကို ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့မီဒီယာတွေနှင့် သူတို့၏အကျိုးဆောင်နေသောအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ Kaladen Press နဲ့ Arakan
ဒီလိုမျိုးဖိအားပေးနေတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တခုက ယူကေ (UK) နှင့် အာရပ်ကမ္ဘာမှာ ပူးပေါင်းကြံစည်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ထင်ရှားတဲ့ Burma Campaign
ယခုအချိန်မှာ အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးတာကတော့ ၂၀၁၀ ကနေ ၂၀၁၅ အထိ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးမီလျံ နှစ်စဉ် ပံ့ပိုးကူညီသွားအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ CFOB က တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကနေဒါမှာရှိတဲ့မြန်မာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီပါဝင်မှူနဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Stephen Harper မှ မြန်မာပြည်ထောက်ပံ့ကြေးရအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်၊ Inter Pares သည် ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ကျေနပ်မှူမရှိဘဲ မသင့်တော်တဲ့အပြုအမူတွေနဲ့ အနှောင့်အယှက်များ ပေးနေခဲ့ပါတယ်။
သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှူတွေဟာ တကယ်တော့လူ့အခွင့်အရေးအတွက် ရရှိအောင်လုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ် ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ မလိုက်ဖက်ပဲ သွေဖီနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဘာအတွက်လဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီအတိုင်း ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေအုန်းမယ်ဆိုရင် ကနေဒါမှာ ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပြင် သန်းခြောက်ဆယ်သော မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် မျက်နှာပျက်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လဲ CFOB အဖွဲ့အစည်းကို တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ရပ်တည်ရှိနေဖို့အတွက်နဲ့ အတိုက်အခိုက် အသွင်ဆောင်တဲ့အပြုအမူတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်သင့်တာကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ရခိုင်ပဋိပကအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သဘောထားကို ဒီနေရာမှာ သိရှိနိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။။ မူရင်းစာကိုမိမိဖာသာဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းလင့်မှာ http://cfob.org/news/CFOBinCrisisWithRohingya.html (ဥမ္မာဦး)
(မိုးမခမှတ်ချက် – စိတ်ဝင်စားဖွယ် စာမူတပုဒ်ကို ကောက်နုတ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်)
3 Responses to ကနေဒါက CFOB အသင်း ရိုဟင်ဂျာများဘက်က လိုက်ဖို့ဖိအားပေးခံနေရခြင်း
မောင်ပျာလောင် on November 9, 2012 at 1:39 pm
ဦးတင်မောင်ထူး စိတ်မပြက်ပါနှင့်ခင်ဗျား၊ မှန်တာကိုလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက် နောက်မှာ သန်းချောက်ဆယ်ကျော်လူထူကြီးရှိနေပါတယ်။ ကနေဒါနိုင်ငံက မြန်မာမိတ်ဆွေများကလည်း
ပြည်ချစ်မြန်မာတစ်ဦးအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြပါ။ Inter Pares ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များကို မေးကြည့်စမ်းပါ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာဘယ်ကလာတဲ့ စကားလည်းဆိုတာ ? ။ ကျနော်သိသလောက်ကတော့ ရှေးပီယ ဆေးကျန်းတွေမှာပါတဲ့ ယိုဖင်ကြား ဆိုတဲ့ဆေးမြစ်နဲ့ BCUK ခရောင်းပန်း (မြန်မာအခေါ်အားဖြင့် – တောင်နှစ်လုံးကြား အော်ပွင့်တဲ့ပန်း) ကို တော်သလင်းလမှာ ဖေါ်စပ်ပြီးသောက်လိုက်ရင် – ရာသီမရွေး + + + ဖြစ်ရောတဲ့။ မိတ်ဆွေများ စပယ်တစ်ယောက် ရဲ့စကားကို အရန်းမယုံနဲ့ နော် – – –
shan lay on November 10, 2012 at 8:34 am
you know yourself what is right and what is wrong,you are the man.
myo myo on November 12, 2012 at 11:07 am
Rhohinga are invaders of Muslim colony, racist, terrorists, don’t give them make wrong information,